Zinedine Zidane oo Kooxda Real Madrid u sheegay in Neymar uu ka door-bidayo xiddig ka ciyaara horyaalka Premier League – Gool FM
(Madrid) 22 Agoosto 2019. Tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa la soo sheegayaa in kooxda ka dhisan caasimadda Spain uu ku wargeliyey in Neymar Jr uu ka door-bidayo laacib ka ciyaara horyaalka Premier League.
Hoggaamiyaha Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa la warinayaa inuu weeraryahanka kooxda Paris Saint-Germain ee Neymar Jr uu ka door-bidayo inuu la soo saxiixdo laacibka khadka dhexe ee naadiga Manchester United ee Paul Pogba.
Labadaan ciyaaryahan oo ka mid ah kuwa ugu magaca weyn kubadda cagta Adduunka ayaa la la xiriirinayey garoonka Bernabeu bilihii dhowaa, iyagoo xiddigahan ay indhaha ku hayaan inay ka tagaan kooxaha ay haatan ka kala tirsan yihiin.
Yeelkeede, wali ma dhici wax heshiis ah oo ku saabsan midkoodna labadaan ciyaaryahan, iyadoo ay meesha ku jirto in Real Madrid aysan u badnayn inay wada qaadato labadaan xiddig.
Wargeyska L’Equipe ayaa la warinaya in Zidane uu u sheegay saraakiisha sar sare ee kooxda Real Madrid inuu door-bidayo Pogba, halkii Neymar la keeni lahaa caasimadda Spain inta yar ee ka harsan suuqa kala iibsiga xiddigaha ee dalkaas.
Man United ayaa ku adkeysatay inaysan xiiseynaynin inay iska iibiso Pogba xagaagan, iyadoo aan xitaa la soo wareegin bedelkiisa inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga xiddigaha xagaagan ee horyaalka Premier League Ingiriiska.
Warbixinta ayaa intaa ku dareysa in tababare Zidane uusan ku qanacsanayn in Neymar Jr uu ku soo daro gool-dhaliyeyaashiisa haatan ee weerarka, taa bedelkeedana uu doonayo inuu shaxdiisa ku xoojiyo xiddiga ay ka soo wada jeedaan Faransiiska ee Pogba.